Ezekieri 45 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mupiro mutsvene neguta (1-6)
Nhaka yejinda (7, 8)
Machinda anofanira kutendeka (9-12)
Mupiro wevanhu; jinda (13-25)
45 “‘Pamunogova nyika kuti ive nhaka yenyu,+ munofanira kupa Jehovha imwe nzvimbo yemunyika yacho kuti ive mupiro mutsvene kwaari.+ Inofanira kunge yakareba makubhiti* 25 000, yakafara makubhiti 10 000.+ Nzvimbo yacho yese ichava tsvene. 2 Nzvimbo yacho ichava nechimwe chikamu chine mativi mana akaenzana chinenge chiine nzvimbo tsvene. Chichange chakareba makubhiti 500 uye chakafara makubhiti 500+ uye kumativi acho ese kuchava nemakubhiti 50 emafuro.+ 3 Panzvimbo iyi yakayerwa unofanira kuyera nzvimbo yakareba makubhiti 25 000 uye yakafara makubhiti 10 000, uye ndimo muchava netemberi, chinhu chitsvenetsvene. 4 Iyi ichava nzvimbo tsvene yevapristi,+ avo vanoshumira panzvimbo tsvene, vachishumira pamberi paJehovha.+ Ndimo muchava nedzimba dzavo uye muchavawo nenzvimbo tsvene inenge iine temberi. 5 “‘Pachava nenzvimbo yakareba makubhiti 25 000 uye yakafara makubhiti 10 000 yevaRevhi,+ avo vanoshumira patemberi yacho uye vachava nedzimba 20 dzekudyira.+ 6 “‘Munofanira kugovera guta racho nzvimbo yakareba makubhiti 25 000 (sezvakangoita mupiro mutsvene) uye yakafara makubhiti 5 000.+ Ichava yeimba yese yaIsraeri. 7 “‘Jinda richava nenzvimbo iri kumativi maviri emupiro mutsvene nenzvimbo yeguta. Ichava pedyo nemupiro mutsvene uye pedyo nenzvimbo yeguta. Ichava kumavirira nekumabvazuva. Kubva kumuganhu wayo wekumavirira kusvika kumuganhu wayo wekumabvazuva, ichange yakareba zvakaenzana nenzvimbo yerimwe remadzinza acho.+ 8 Nzvimbo yacho ndiyo ichava nhaka yaro muIsraeri. Machinda angu haazoitirizve vanhu vangu utsinye,+ uye achapa imba yaIsraeri nyika yacho maererano nemadzinza ayo.’+ 9 “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Zvakaipa zvenyu zvazonyanya imi machinda aIsraeri!’ “‘Siyanai nemhirizhonga uye neudzvinyiriri, muite zvakanaka uye zvakarurama.+ Regai kutorera vanhu vangu zvinhu zvavo,’+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. 10 ‘Munofanira kushandisa zvikero zvakarurama neefa yakarurama* nebhati rakarurama.*+ 11 Panofanira kuva nechinhu chimwe chete chinoshandiswa pakuyera uwandu hunosvika efa uye bhati. Bhati rinofanira kunge rakaenzana nechikamu chimwe chete pazvikamu 10 zvehomeri* uye efa inofanira kunge yakaenzana nechikamu chimwe chete pazvikamu 10 zvehomeri. Homeri ndiyo ichashandiswa pakuyera zvinhu. 12 Shekeri*+ rimwe chete rinofanira kunge rakaenzana nemagera* 20. Kana mukabatanidza mashekeri 20 nemashekeri 25 nemamwe mashekeri 15, achaita mane imwe chete.’* 13 “‘Uyu ndiwo mupiro wamunofanira kupa: chikamu chimwe chete pazvikamu 6 zveefa kubva pahomeri imwe neimwe yegorosi, uye chikamu chimwe chete pazvikamu 6 zveefa kubva pahomeri imwe neimwe yebhari. 14 Mafuta amuchapa anofanira kuyerwa pachishandiswa bhati. Bhati rakaenzana nechikamu chimwe chete pazvikamu 10 zvekori* uye mabhati 10 ihomeri, nekuti mabhati 10 akaenzana nehomeri. 15 Pazvipfuwo zviri muIsraeri, munofanira kupa gwai rimwe chete pamakwai 200 ega ega. Zvipo izvi zvichava mupiro wezviyo,*+ uye zvibayiro zvinopiswa+ nezvibayiro zverugare+ kuti vanhu vayananisirwe,’+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. 16 “‘Vanhu vese vemunyika yacho vachapa mupiro uyu+ kujinda riri muIsraeri. 17 Asi panoitwa mitambo,+ nepakugara kwemwedzi, nepamaSabata,+ nemimwe mitambo yese inofanira kuitwa neimba yaIsraeri,+ jinda racho ndiro richapa zvinhu zvichashandiswa sezvibayiro zvinopiswa,+ uye mupiro wezviyo,+ nemupiro wezvinwiwa. Ndiro richapa zvinhu zvechibayiro chechivi, nemupiro wezviyo, nechibayiro chinopiswa, nechibayiro cherugare, kuti imba yaIsraeri iyananisirwe.’ 18 “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Mumwedzi wekutanga, pazuva rekutanga remwedzi wacho, unofanira kutora mukono mudiki wemombe wotsvenesa nzvimbo tsvene pachivi.+ 19 Mupristi achatora rimwe ropa rechibayiro chechivi oriisa pagwatidziro* retemberi+ yacho nepamakona mana echikamu chihombe cheatari nepagwatidziro regedhi rechivanze chemukati. 20 Izvozvo ndizvo zvauchaita pazuva rechinomwe remwedzi wacho, kana paine munhu akanganisa asina kuzvironga kana kuti asingazivi;+ uye imi munofanira kuchenesa temberi yacho.+ 21 “‘Pazuva rechi14 remwedzi wekutanga, munofanira kuchengeta Paseka.+ Munofanira kudya chingwa chisina mbiriso kwemazuva manomwe.+ 22 Zuva iroro, jinda racho richapa mukono mudiki wemombe kuti uve chibayiro charo chechivi nechevanhu vese vemunyika yacho.+ 23 Kwemazuva manomwe emutambo wacho rinofanira kupa mikono midiki yemombe minomwe yakanaka nemakondohwe manomwe akanaka kuti zvive zvibayiro zvinopiswa kuna Jehovha, uye richazvipa zuva nezuva kwemazuva acho manomwe.+ Rinofanira kupawo mbudzi hono yechibayiro chechivi zuva nezuva. 24 Pamukono wemombe wega wega, nepagondohwe rimwe nerimwe, jinda racho rinofanira kupawo efa yemupiro wezviyo uyewo hini* yemafuta paefa imwe neimwe. 25 “‘Kubva pazuva rechi15 remwedzi wechinomwe, rinofanira kuita mazuva manomwe richipa chibayiro chechivi, nechibayiro chinopiswa, nemupiro wezviyo, nemafuta pamutambo wacho,+ zvakangofanana nezvarakambopa.’”
^ Kana kuti “maina rimwe chete.” Ona Mashoko Ekuwedzera B14.